रोजगारी Archives | Page2of 8 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - मन्त्रीपरिषद निर्णय : भदौपछिको नियुक्ति खारेज, जागिर चट् ! - page 2
काठमाडौं । गत भदौपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका दर्जनौंको जागिर जाने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुने भएको हो । वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि पनि कामचलाउ बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्ध राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यसरी नियुक्ति गरिएका क्षेत्रहरुमा संस्थान, प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 'सीईओ' सम्म छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा नै उद्यम गरेर बसेका ८ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान विवरण गरेको छ। पुरस्कृत हुने मध्येबाट सोनाम लामालाई सर्वोत्कृष्ट घोषित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सर्वोत्कृष्ट भएका लामालाई १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। बाँकीले ५०र५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। लामा आराभा नेपाल मोर्ड एग्रिकल्चर कम्पनी सुन्दरबजार लमजुङका सञ्चालक हुन्। दुबई र इजराएल बसेर फर्किएका उनले १६ करोड रुपैयाँ लगानीमा एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरेको छ ।बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले सरकारको आग्रह पछि निवेदन फिर्ता लिन थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म १९३ कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिइसकेका छन् । “ सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन फिर्ता गर्न आह्वान गरेसँगै कर्मचारीले निवदेन फिर्ता लिइरहेका हुन्। ”, उनी भन्छन, “अहिले दैनिक १० देखि १२ कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिइरहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
विराटनगर । प्रदेश नं १ को सरकारले उपलब्ध वन क्षेत्रबाट पाँच हजार जनाका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश नं १ को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्थक योगदान दिनसक्ने देखिएकाले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘एक पालिका एक फर्निचर उद्यम’ तथा ‘एक उपभोगता समूह एक वन उद्यम’ को स्थापना गर्न आगामी आवदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
नारा-फ्रि भिसा फ्रि टिकट, असुली पाँच गुणा बढी !
बिष्णु घिमिरे काठमाडौं । सुन्दा पनि राम्रो छ फ्रि भिसा फ्रि टिकट । मेनपावर संसार टेकबहादुर गुरुङ नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएका बेला उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरे । उक्त निर्णयका पछाडि बंगाली मेनपावर सञ्चालकबाट करोडौँ रूपैयाँ खाएको आरोप गुरुङमाथि लागेको छ । तर सरकारले भनेजस्तो वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूले वास्तवमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको महसुस गर्न पाएका छैनन् । मेनपावर सञ्चालकहरूले अहिले पनि पाँचौ गुणा बढी रकम जाने कामदारहरूबाट असुलिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले त्यसतर्फ निगरानी बढाउन सकेको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । रोजगारीसँग सम्बन्धित मुद्धाहरुमा पैरवी गर्न दायित्व संस्थाले युवा अभियन्ता छनोट गरेको छ । युवा आज १ का कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुको क्षमताको आधारमा निर्णायक समितिले उत्कृष्ठ १० जनालाई छनोट गरेको हो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायतको निर्णायक समितिले पहिलो चरणमा छनौट भएका २० जनाबाट १० जनालाई छनौट गरेको हो । छनौट हुनेहरुमा शिक्षित भट्ट, रोहित कुमार मारवाडी, फुर्पा शेर्पा, श्रीजंग राई, मेधा शर्मा, महेश दाहाल, डा। जितेन्द्र उपाध्याय, भावना खतिवडा, पुजा पौडेल र मेघ्ना लामा रहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
म्याग्दी । पैदल तथा हवाईमार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेशका लागि मोटो रकम बुझाएर नाइजेरियाको लागोसमा पुगेका म्याग्दीका १३ जना युवा अलपत्र परेका छन्। दलाललाई मोटो रकम बुझाएर भारत, थाइल्याण्ड हुँदै नाइजेरिया पुगेका म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–५ अर्मनका युवाले दिएको जानकारीअनुसार दलालले विभिन्न बहाना बनाएर नाइजेरियामा प्रवेश गरेपछि लागोसमा रहेको एक होटलमा म्याग्दीका १३ सहित २३ जना नेपाली युवालाई बन्धक बनाएका थिए। नाइजेरियन दलालसँगै रहेका नेपाली दलालले समेत युवालाई होटलबाट बाहिर आउन नदिएको नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै ती युवाले जानकारी दिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सन् २०१९को लागि भएको कोरियन भाषा परीक्षामा ७४ हजार ८ सय ६६ जनाले सहभागी भएका छन् । ईपीएस कोरिया शाखाले दिएको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार फारम भरेका ७ हजार ३ सय ९८ जना परक्षमा अनुपस्थित रहे । कुल ८२ हजार २ ६४ जनाले परीक्षाका लागि आवेदन भरेका थिए । यो वर्ष नक्कली परीक्षा दिने र दिन लगाउने २४७ जना विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरुबाट पक्राउ परेको ईपीएस कोरिया शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले बताए । ‘शान्तिपूर्ण रुपमा परीक्षा सकिएको छ । कुनै प्राविधिक समस्या आएनन्,’ भण्डारीले भने । यो वर्ष काठमाडौं र पोखरामा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्